Somaliland.Org » Goleyaasha Iyo Hadalkii Riyaale
April 29th, 2008 Comments Off Maxay ka siman yihiin Khudbadii Siyaad Barre jeediyey January 1991 iyo tan uu Riyaale jeediyey April 2008?
Waxaa maanta labada gole ee Guurtida iyo Wakiilada si wada jir ah ugu jeediyey qudbad Madaxweynaha waqtigiisii dhamaanayo ee Riyaale. Hadal dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo malaha loogu tala galay qudbad sanadeedkii ayaa sida lasheegay waxaa fadhiyey 138 mudane oo labada gole ah, 23 wasiir, komishinka doorashooyinka ee qaranka, wuxuuna kullankaasi ka dhacey xarunta golaha guurtida. Kulankaas waxaa daadihinayey Gudoomiyaha Wakiiladda Somaliland C/raxmaan Cirro.
Hadaba intii aanu Riyaale ugellin nuxurka qudbadiisa waxa uu si toos ah Riyaale uga cudur daartey inaan wax su’aal ah la weydiin karin. Arrinkaas ayaa dhaliyey sawaxan iyo guux lagu diidanyahay in Riyaale diido in wax su’aal ah la waydiiyo.
Qudbadda Riyaale waxa nuxurkeedu ahaa in aanu ka tanaasuli doonin kordhintii golaha guurtidu u samaysay oo uu ku sheegay inay sharci tahay. waxa kale oo uu ku soo qaaday inaay muhiim tahay in laga guuro siy